कोरोना महामारीमा विकराल बन्दै मानसिक समस्या - नेपालबहस
कोरोना महामारीमा विकराल बन्दै मानसिक समस्या
| १६:०५:१० मा प्रकाशित
२१ वैशाख,टीकापुर । कैलालीको टीकापुरकी ४० वर्षीया अनिता (नाम परिवर्तन) का श्रीमानको कोरोना संक्रमणका कारण संयुक्त अरब इमिरेट्सको दुबईमा मृत्यु भयो । उनी वैदेशिक रोजगारीका क्रममा दुबई थिए । तीन वर्ष दुबईमा रोजगारी गरेर घर फर्कने तयारीमा रहेका अनिताका श्रीमान् कोरोना संक्रमणका कारण हवाई सेवा बन्द भएपछि फर्किन पाएनन् । आफ्ना ४१ वर्षीय श्रीमानसँग अनिताको अघिल्लो वैशाखको अन्त्यमा फोनमा कुराकानी भएको थियो । दुई दिनअघि टाउको दुखेको छ भनी फोन गरेका उनीसँग दुई दिनपछि फोन गर्दा उठेन । उनले फोन उठाउन छोडेपछि घर परिवारमा चिन्ता छायो ।
अनिताकी छोरीले उनीसँगै दुबईमा काम गर्ने साथीलाई फोन गरिन् । उनले कोरोना भाइरस संक्रमण भएकाले अस्पताल लैजान लागेको खबर दिए । त्यसपछि १० दिनसम्म न दुबईबाट फोन आयो, न कसैसँग सम्पर्क भयो । यता परिवारमा पीडा थपियो । ११ दिनपछि गत वर्ष जेठ ६ गते उनले काम गर्ने कम्पनीका मालिकले फोनमै अनितालाई कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु भएको खबर सुनाए ।
घर आउने तयारीमा रहेका श्रीमानको मृत्युको खबर अनितालाई असह्य भयो । उनी मुर्छित भइन् । छिमेकीले पनि अनिताले फोनमै रोइकराइ गरेको सुने । कोरानाका कारण उनको मृत्यु भएको खबर गाउँमा फैलियो । उनको परिवारमा मात्रै नभएर गाउँभरि शोक छायो । अनिताका दुई छोरी र एक छोरा छन् । जेठी छोरीको उमेर २१ वर्ष पुगेको छ भने कान्छी छोरी १८ वर्षकी भइन् । छोराछोरीहरुले बुबाका साथी र कम्पनीका मालिकलाई बुबाको शवको भिडियो वा फोटो देखाइदिन धेरै अनुरोध गरे, तर हेर्न पाएनन् ।
दुबईमा उनको मृत्यु भएको १६ दिनपछि त्यहाँको सरकारले नै उनको अन्त्येष्टि ग¥यो । यता घरमा उनको काजक्रिया भयो । उनी विदेश जाँदा रु पाँच लाख ऋण लिएका थिए । उनको दुबईमा खासै कमाई पनि थिएन । “दुई÷तीन महिनामा कहिले रु ४० हजार त कहिले रु ५० हजार पठाउँथे । त्यो रकम घरखर्चमै सकिन्थ्यो । श्रीमानले पठाएको रकम बचाएर अनिताले रु दुई लाख ५० हजार ऋण तिरिसकेकी थिइन् । रु दुई लाख ५० हजार ऋण तिर्न बाँकी नै थियो ।
अनिताले सुस्केरा हाल्दै भनिन्, “तीन छोराछोरी छन् । घरको सम्पत्ति केही छैन । कमाउने आधार छैन । रोजगारीमा गएका श्रीमान् अर्काको देशमा बिते । मैले केही सोच्न सकिनँ । हामीले आत्महत्या गर्ने योजना बनायौँ ।” “म तीन महिनासम्म कहिल्यै पनि राम्ररी सुत्न सकिनँ । खाना खान मन लागेन । अरूसँग बोल्न पनि मन लागेन । सधैँ टोलाई मात्रै रहेँ”, उनले भनिन्, “त्यस समयमा त मैले मृत्यु मात्र विकल्प देखेँ, बाच्ने अरू कुनै आधार नै देखिन ।”
मनोसामाजिक परामर्शकर्ता धनराजले १० दिनसम्म लगातार अनिता र उनका छोराछोरीलाई परामर्श सेवा दिए । बिस्तारै अनिता शान्त भइन् । धनराजको सल्लाहमा उनले श्रीमानको बीमा रकम दाबी गरिन् । बीमाबाट रु १० लाख प्राप्त भयो । “बीमाको रकम पाएपछि श्रीमानले दुबई जाँदा लिएको ऋण तिरेँ । बचेको रकमले सानो घर बनाउन थालेकी छुँ”, उनले भनिन्, “समस्या त अहिले पनि छ । पढिरहेका दुई छोरी पढाइ छोडेर भारत कमाउन गएका छन् । मैले जन्मेपछि मृत्यु हुन्छ भन्ने नै बुझेँ । अब बाँच्छु । छोराछोरीको सहारा बन्छु ।”
अनिताकी कान्छी छोरी एसइई उत्तीर्ण भएकी छिन् । उनी कृषि विज्ञान विषय पढ्ने योजनामा थिइन् तर घरको आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाले उनी पढाइ छोडेर कमाउनका लागि भारत गएकी छिन् । उनको पढ्ने सपना बुबाको मृत्युसँगै निम्तिएको गरिबीले तुहाएको छ । टीकापुरकै ४३ वर्षीय कविताको कथाव्यथा पनि उस्तै छ । उनका श्रीमान् शेरबहादुर शाही पाँच वर्षअघि रोजगारीका लागि मलेसिया गएका थिए । विश्वभर कोरोना महामारी फैलियो । कोरोना महामारीकै बीच उनले गत वर्ष मलेसियामै आत्महत्या गरे ।
शेरबहादुर मलेसिया गएको पाँच वर्ष भएको थियो । उनी मलेसिया गएको तीन वर्षपछि एकपटक घर आएका थिए । फेरि मलेसिया गएका उनले दुई वर्ष उतै बिताएर सधैँका लागि घर फर्कने योजनामा थिए । गत वर्ष साउनमा उनले आत्महत्या गरेको खबर आयो । कविताका चार छोराछोरी सन्तान छन् । गत वर्ष साउन १६ गते साँझ घरमा श्रीमती र छोराछोरीसँग कुराकानी गरेका उनी त्यसपछि सम्पर्कविहीन भए । कविताको जीवनको त्यो अति कठिन दिन थियो । १७ गते बिहानै उनको मृत्युको खबर आयो । “अघिल्लो वर्ष कोरोना महामारीका कारण उनको खासै काम चलेको थिएन । सातामा दुई दिन सामान्य खर्चका लागि काम दिएको छ भन्थ्ये । हवाई सेवा खुलेपछि घर फर्किन्छु भनेका थिए”, आँसु झार्दै श्रीमती कविताले भनिन्, “एक्कासि उनको मृत्युको खबर आयो । तेह्र दिनपछि बाकसमा उनको शव फर्कियो ।”
शेरबहादुरको मृत्युपछि कविताको परिवारमा बिचल्लीमा प¥यो । श्रीमती कविताको सानो कस्मेटिक पसल थियो । श्रीमान् बितेको तीन महिनासम्म निकै तनाव भएको उनले बताइन् । “उनको मृत्युपछि मैले संसार देख्न छोडे जस्तै अनुभव भयो । मेरो जीवन नै समाप्त भएको अनुभव गर्न थाले । राति निद्रा लाग्न छोड्यो”, कविता सुनाउँछिन् ।
श्रीमानको मृत्युले अति विचलित भएकी कवितामा डिप्रेशनको समस्या बल्झिन थाल्यो । छरछिमेकले उनको अवस्था देखेर मनोसामाजिक परामर्शकर्तालाई गुहारे । मनोसामाजिक परामर्शकर्ताको लगातारको ‘काउन्सिलिङ’ र उपचारपछि बिस्तारै उनको अवस्थामा सुधार आउन थाल्यो । “अहिले केही सामान्य भएकी छु”, उनले भनिन् ।
कैलालीको लम्कीचुहा नगरपालिका मनोज विक भारतमा रोजगारी गर्दथे । भारतमा कोरोना महामारी तीव्र बन्दै गयो । सरकारले लकडाउन ग¥यो । लकडाउनका कारण रोजगारी गुमेपछि मनोज घर फर्किए । घर फर्किएको लामो समयसम्म बेरोजगार बस्नुपर्दा उनमा मानसिक समस्या बल्झिन थाल्यो । केही दिनअघि उनको घरमा पुग्दा उनी टोलाएर बसेका थिए । केही बेरसम्म उनले कुरा गर्न चाहेनन् । पछि विस्तारै भने, “मेरो सात जनाको परिवार छ । घरपरिवारको लालनपालनको जिम्मेवारी मेरै काँधमा छ । म ऋणमा चुर्लुम्म डुबेको छु । परिवार कसरी पाल्ने होला रु”
उनका परिवारका एक सदस्यका अनुसार भारतबाट फर्किएको केही महिनापछि मनोज घण्टौंसम्म एक्लै टोलाउन थाले । उनी आफैँसँग कुरा गर्दथे । परिवारका सदस्यहरुसँग झर्किन्थे । रातभरि सुत्दैनथे । मनोजलाई डाक्टरकहाँ लगियो । डाक्टरले तीन महिनाका लागि औषधि दिएका छन् । मनोजले भने, “डाक्टरले तीन महिनासम्म औषधि खानु, शान्त रहनु र आराम गर्नु भनेका छन् तर परिवार कसरी पाल्ने भन्ने चिन्ताले छोड्दैन ।”
उनी भन्छन्, “मलाई अघिल्लो वर्ष चैतदेखि नै छोराहरुको चिन्ताले समस्या भइरहेको थियो । अहिले पाँच महिनादेखि निद्रा लाग्न छोडेको छ । खाना खान मन लाग्दैन । अरूसँग कुरा गर्न झर्को लाग्छ । रिस उठ्छ ।” समस्या बढेपछि उनी डाक्टर कहाँ गए । उनले भने, “डाक्टरको सल्लाहअनुसार तीन महिनासम्म औषधि सेवन गरेँ । अहिले अलिकति सहज भएको छ ।”
केही समय कोरोना महामारी स्थिर रहेकामा अहिले फेरि कोरोना संक्रमणको दोस्रो भेरियन्ट फैलिएको छ । पछिल्ला केही सातायता नेपालमा कोरोनाको दोस्रो भेरियन्टका कारण हाहाकार अवस्था छ । कैलाली, कञ्चनपुरसहित नेपालका दुई दर्जनभन्दा बढी जिल्लामा पूर्णरुपमा लकडाउन शुरु गरिएको छ भने केही जिल्लामा आंशिक रुपमा लकडाउन गरिएको छ ।
कोहलपुर मेडिकल कलेजमा बाहिरबाट रेफर गरिएका बिरामी बढी आउने गरेका छन् । उनले भने, “बढिजसो सुदूरपश्चिम प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशका विभिन्न जिल्लाका अस्पतालबाट रेफर गरेर आएका बिरामी आउने गरेका छन् ।” डाक्टर बेल्वासेका अनुसार अहिले उपचारमा आउने मानसिक रुपमा अस्वस्थ अधिकांश बिरामीमा कोरोना महामारीको असर परेको छ । कोरोना महामारी र लकडाउनका कारण रोजगारी गुमाएका, आर्थिक सङ्कटमा परेका, बेरोजगार भएर सबैजना घरमै बस्दा अशान्ति बढेको आदि कारणले मानसिक समस्यामा वृद्धि भइरहेको छ ।
गत वर्ष लकडाउन खुकुलो भएपछि कैलालीको त्रिनगर तथा अन्य नाकाबाट सुदूरपश्चिम प्रदेशका विभिन्न जिल्लाका एक लाख ७४ हजार ८५ जना सुदूरपश्चिमेलीहरु पुनः भारत फर्किएका थिए । कोरोनाको दोस्रो भेरियन्ट फैलिएपछि भारतका विभिन्न राज्य वा शहरमा रहेका नेपालीहरु पुनः स्वदेश फर्किन थालेका छन् । राष्ट्रिय जनगणना २०६८ अनुसार कैलाली जिल्लाको जनसङ्ख्या ७ लाख ७० हजार २७९ रहेको छ ।
पाँचथरका गाउँभरि ज्वरोका बिरामी,अधिकांशमा कोरोना संक्रमण ३ मिनेट पहिले
दैलेखमा कोरोनाले एउटै समुदायका ९ जनाको मृत्यु २४ मिनेट पहिले
कोरोनाबाट जनस्वास्थ्यकर्मी रत्नलाल श्रेष्ठको ज्यान गयाे ३० मिनेट पहिले
अर्जुनधारा नपाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खाम्याहाङको निधन ५९ मिनेट पहिले
कोरोनाले सप्तकोशी नगरपालिकाकी उपमेयर आशा चौधरीको मृत्यु २३ मिनेट पहिले
उपनिर्वाचनमा संक्रमित मतदातालाई छुटै मतदान केन्द्र, कर्मचारीलाई पीपीई ! ३८ मिनेट पहिले
विद्यार्थीको पीडा : अनलाइनको आशै छैन, पशुचौपाया चराउँदै बित्छ दिन ! ३८ मिनेट पहिले
नागरिक लगानी कोषले गर्यो ५९ करोड बढि मुनाफा, प्रतिशेयर आम्दानी कति ? ४० मिनेट पहिले
निर्धन उत्थानले बिहीबारदेखि संस्थापक शेयर लिलामी बिक्री गर्ने, शेयरमूल्य कति ? ५७ मिनेट पहिले
मेची प्रादेशिक अस्पतालका लागी नौ करोड बजेट विनियोजन ६० मिनेट पहिले
नेता चौलगाईंको पशुपति आर्यघाटमा अन्तेष्टि ६ दिन पहिले
नेशनल माइक्रोफाइनान्सको लिलामी शेयर भर्ने आज अन्तिम दिन २ दिन पहिले
फौजी कीराले मकैबाली नष्ट, किसान दोहोरो चिन्तामा ३ दिन पहिले
ओलीको नक्कली राष्ट्रवादको धोती खुस्कियो, हिन्दूस्तान टाइम्स लेख्छ–ओलीलाई समर्थन छ ! ६ दिन पहिले
आँबुखैरेनीका अग्निपीडितलाई गाउँपालिकाद्वारा राहत प्रदान ४ हप्ता पहिले
संक्रमणलाई ध्यानमा राखेर स्वास्थ्य मापदण्डमा कडाइ गर्दै चन्द्रागिरि ३ हप्ता पहिले
बुटवलमा उपचाररत थप दुई संक्रमितको ज्यान गयाे २३ घण्टा पहिले
आइसोलेशन निर्माणमा जुटे स्थानीय सरकार १ हप्ता पहिले
मुम्बईले टेस जितेर राजस्थानलाई दियो ब्याटिङको निम्तो, प्लेइङ–११ मा फेरबदल ३ हप्ता पहिले
श्रीमति सुत्केरी हुनेपछि चर्चित क्रिकेट कोहली बिदामा ६ महिना पहिले
कुलेखानी तेस्रोको निर्माणमा लापरवाही गरे ठेक्का रद्द गरी कालोसूचीमा राख्ने २ वर्ष पहिले
महिला चेम्बरको ट्रेड फेयर समापन (फोटोफिचर) २ महिना पहिले
एमबाप्पे तीन हप्ता मैदान बाहिर हुने १० महिना पहिले